ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : နေရာတိုင်းမှာ သြဇာတိက္ခမကြီးမားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နေရာတိုင်းမှာ သြဇာတိက္ခမကြီးမားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
Geremek Award Laureate, Aung San Suu Kyi, to be honored at CD Ministerial Conference
၂ဝ၁၃ (ဂီရီမက်) ဆုရထားသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒီမိုကရေစီ ကွန်မြူနတီ ဝန်ကြီးအဆင့် ကွန်ဖရင့်မှ ဂုဏ်ပြုမည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်နေသူ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီ ကွန်မြူနတီရဲ့ Geremek Award (ဂီရီမက်) ဆုချီးမြှင့်ပါမယ်။
(ဂီရီမက်) ဆုဟာ ဒီမိုကရေစီရေးမှာ ထူးချွန်စွာ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ ပါမောက္ခ (ဘရိုနစ်ရ်ှလော့ဖ် ဂီရီမက်) ကို ကွန်မြူနတီကနေ ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဒီမိုကရေစီ ကွန်မြူနတီကို တွဲဖက်ထူထောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလန်မှာ အလွန်အရေးပါလှတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အပြောင်းအလဲကာလတွေမှာ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ ပဌမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ ပိသုကာတဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆုကို အရင်ကရထားသူတွေကတော့ ၂ဝ၁၁ မှာ Belarusian opposition ဘိုင်လိုရပ်စ် အတိုက်အခံ၊ ၂ဝ၁ဝ မှာ ကျူးဘား တရားဟောဆရာ Jose Conrado Rodriguez ဂျိုးစ် ကွန်ရာဒို ရိုဒီဂါ နဲ့ ၂ဝဝ၉ မှာ Nelson Mandela နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
2013 Geremek Award Laureate, Aung San Suu Kyi, to be honored at CD Ministerial Conference
Nobel Peace Prize Laureate, political activist from Myanmar/Burma Aung San Suu Kyi, is to be honored with the Community of Democracies’ Geremek Award.
The Geremek Award is bestowed by the Community of Democracies for outstanding achievements in democracy support. Named after the late Prof. Bronisław Geremek, CD co-founder,acrucial contributor to the democratic transformation in Poland and one of the architects of the round-table talks and the first democratic elections in the country, the prize is aimed to highlight the activities of democratic activists, often in unfavorable conditions. Previous laureates include the Belarusian opposition (2011), Cuban priest Jose Conrado Rodriguez (2010), Nelson Mandela (2009)
This year, the Community of Democracies’ Selection Committee has chosen to Geremek Award the prize to Aung San Suu Kyi, for her struggle to promote democratic values and practices in Myanmar/Burma.
Also during the conference, the Palmer Prize will be awarded. It is bestowed by the Council foraCommunity of Democracies (representing the CD International Steering Committee) in the name of late American Diplomat Mark Palmer. Three diplomats are to receive the 2013 Palmer Prize: Christopher Stevens, U.S. Ambassador to Libya killed in September 2012 (posthumously); Stefan Eriksson, Ambassador of Sweden to Belarus in the years 2008- 2012; and Mongolian Ambassador-at-Large, Suren Badral.